Aix Arome Cafe Ikhefi - Imagazini yoyilo
Ikhefi Ikhefi kulapho iindwendwe ziziva zihlala khona kunye neelwandle. Ubume obukhulu beqanda obabumbelwe ngaphakathi kwesithuba busebenza ngaxeshanye njenge-cashier kunye nonikezelo lwekofu. Ukubonakala kwe-icon ye-booth kuphefumlelwe ngombala omnyama kwaye oqaqambileyo ojonga i-coffee. Ukuvuleka okubini kumphezulu ngaphambili kwamacala omabini “ebhulukhwe enkulu” kusebenza njengomthombo wokungena komoya kunye nokukhanya kwendalo. Ikhefi ibonelela ngetafile ende njengesixa se-octopus kunye neebhuthi zizonke. Ezi chandeliya ezibonakala ngathi zingaxhanywanga zifana nombono weentlanzi kumphezulu wamanzi, iingqiniba ezikhanyayo zithatha ukukhanya kwelanga okuqaqambileyo ukusuka kwisibhakabhaka esimhlophe.
Igama leprojekthi : Aix Arome Cafe, Igama labayili : One Plus Partnership Limited, Igama lomthengi : Aix Arome Coffee Co. Ltd..
Ikhefi One Plus Partnership Limited Aix Arome Cafe